अध्यादेश मार्फत पर्सि बालुवाटरबाटै गरिँदैछ यस्तो ठूलो घोषणा, के होला ? - News20 Media
May 27, 2021 N20LeaveaComment on अध्यादेश मार्फत पर्सि बालुवाटरबाटै गरिँदैछ यस्तो ठूलो घोषणा, के होला ?
१३ जेठ, काठमाण्डौ
आगामी आर्थिक वर्ष २०७८र०७९ को बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याउने तयारी गरिएको छ । सरकारले त्यसअघि लागि भोली आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्न लागेको छ । शुक्रबार दिउँसो २ बजे अर्थ मन्त्रालयमा जुम मिटिङमार्फत आर्थिक सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्न लागिएको छ ।
प्रधानमन्त्रीको निवास बालुवाटारबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जेठ १५ गते बजेट घोषणा गर्न लागेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा संसद विघटन गरिएपछि बजेट अध्यादेशमार्फत ल्याउन लागिएको हो ।
संसद विघटन गरिएकै कारण सरकारको नीति तथा कार्यक्रम पनि प्रभावित भएको छ । बजेटको १५ दिन अघि नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था भए पनि यसपटक नीति तथा कार्यक्रम आएको छैन ।
ओलीलाई चुनौती, मैले हेरेर बस्नेवाला छैन असाधारण निर्णय गर्न सक्छु : सभामुख
संविधान जलाएर बिहार पारिबाट ढुङ्गा हान्ने महत्तोको दादागिरी। संविधानमा बहुल राज्य कायम नभएसम्म आन्दोलन जारी रहने चेतावनी।।
केपी ओली आधुनिक नेपालका निर्माता : महेश बस्नेत